Fahatoniana maharitra ! | NewsMada
Fahatoniana maharitra !
Par Taratra sur 08/01/2019
Na inona na inona tsy fifankahazoana eo amin’ny tontolo politika teto Madagasikara, tsy mbola niady na sanatria nifandrafy ny samy Malagasy. Zava-dehibe io satria mbola mahazatona ny kolontsainy ny Malagasy. Raha ny filazan’ireo mpahay tantara, tranga iray anisany nanahirana fatratra ny vahiny nikotrika sy niketrika ny hanjanaka an’i Madagasikara izany. Nampiadiana ny tatsy, nampifandonina ny taroa fa niala maina…
Io fahatoniana maharitra io no takin’ny vanim-potoana ankehitriny. Tafiditra ao anatin’ny kilalao politika avo lenta i Madagasikara. Mila mandinika tsara ny Malagasy tsirairay mba tsy ho latsa-nenina any aoriana. Mety ho samy mitonona ho tia an’i Madagasikara fa ny fomba hanehoana izany no samihafa. Tsy tokony hatao hampiady na sanatria hampifandrafy ny samy Malagasy izany.
… Maro ny fomba amam-panao sy ny kolontsaina ary ny fahendrena malagasy ahafahana miala amin’ny fifanolanana. Anisan’ireny ny fifanakalozan-kevitra, ny fifanajana, ny fifanomezan-kasina, ny tsy fihatsarambelatsihy, ny tahotra an’Andriamanitra, ny fitandroana fatratra ny fihetsika sy ny teny aloaky ny vava mba tsy hananan-tsiny na sanatria hanody (lalàn’ny tsiny sy ny tody…), sns. Raha ireny no omena vahana, azo antoka fa hivaha ny olan’ny kilalao politika mamely mafy an’i Madagasikara ankehitriny.
Ny indro kely, tsy notezaina loatra amin’ireny fomba amam-panao sy kolontsaina ary fahendrena malagasy ireny ny sasantsasany amin’ny Malagasy. Ao ireo tsy nahatazona izany noho ny fibosesiky ny riba vahiny. Nisy ny nanary azy ireny noho ny fieritreretana fa tsy mandroso ny olona mahatazona ny kolontsainy sy ny fombany, sns.
… Rehefa fakafakaina lalina, mbola ao amin’ny Malagasy ny fahendrena napetraky ny razany, saingy mila fohazina amin’ny alalan’ny fifampitaizana izy ireny. Faharoa, mila ampifanarahana amin’ny zava-misy sy ny vanim-potoana iainana ny sasany mba hirindra araka ny tokony ho izy ny fiainana azy. Mila fahatoniana maharitra anefa ny fanatanterahana izany. Fahatoniana mitarika any amin’ny fahaiza-mandinika, mitohy amin’ny fanapahan-kevitra voalanjalanja, io ny miteraka fiainana mirindra ! Zovy no tsy maniry hiaina ao anatin’izany ?